SUPER BOWL 2022 KWITV E-UK | UYIBUKELA NJANI IBENGALS V RAMS - EZEMIDLALO
I-Super Bowl ka-2022 kwiTV e-UK: Uyibukela njani i-Bengals v Rams
I-Super Bowl ngumboniso okhulayo e-UK njengomdla kwi-NFL izuza ukutsalwa kwicala elingasempuma ye-Atlantiki, kwaye iza kwiscreen seTV esikufutshane nawe ngale Cawa.
Owona mboniso mkhulu kwi-turf uya kudlalwa phakathi kweCincinnati Bengals kunye neLos Angeles Rams, iseti entsha yabakhuphisanayo ukukhaba-ukuqala emva kwexesha likaTom Brady.
Umdlali we-quarterback uJoe Burrows uye wafumana i-hype eninzi ngexesha lemidlalo ye-playoff ngenxa yesimbo sakhe sokuzithemba kakhulu, ngelixa igqala le-Rams QB uMat Stafford edubula umsesane wakhe wokuqala weSuper Bowl kwisizini yakhe yokuqala emva kokuphela kweminyaka eli-12. iiLions zaseDetroit.
Bukela iSuper Bowl ngqo kwiSky Sports
Omabini la maqela azakuhamba ngehamile-ne-tongs ukuze aphumelele eLos Angeles - ibala lemidlalo leSuper Bowl 'likhaya' kwiiRams ngexesha lexesha eliqhelekileyo - kwaye abaphulaphuli behlabathi abakhulayo baya kuba khona ukuze bayibone yonke into.
I-BBC, iSky Sports kunye ne-NFL Gamepass zonke ziqhayisa ngoluhlu lwezinto onokukhetha kuzo ukuze uyonwabele. Jonga yonke into ofuna ukuyazi apha ngezantsi.
Umabonwakude ikuzisa zonke iinkcukacha zendlela yokubukela iSuper Bowl bukhoma kumabonwakude ngo-2022.
Ihlabathi lezemidlalo kwindawo enye
Uhlaziyo oluvela kwihlabathi lezemidlalo kumabonakude, kuquka iindaba, iimbono kunye nendlela yokuzibukela zonke ziphila.
Ngaba i-Super Bowl kwi-TV yase-UK?
Ewe! ISuper Bowl LVI iza kwizikrini zeTV zase-UK kule mpelaveki inokhetho oluninzi olubandakanya amajelo asimahla ukuya emoyeni, imirhumo ehlawulwayo kunye nokukhetha ukubukela usasazo olupheleleyo lwase-US kubandakanya iintengiso kunye nokunye.
Jonga uluhlu lweenketho ezingezantsi kubandakanya amaxesha kunye nekhonkco lokubukela umdlalo kwiqonga lamaqonga.
Umboniso wexesha lesiqingatha seSuper Bowl ngo-2022 - ixesha, abadlali kunye nokunye
Uyibukela njani iSuper Bowl ka-2022 e-UK
I-Super Bowl iya kuboniswa ngqo kwi-BBC One ukusuka 11:30pm kwi NgeCawa ye-13 kaFebruwari 2022 .
Ungawusasaza ngqo umdlalo kwi-BBC iPlayer usebenzisa izixhobo ezininzi ezibandakanya ii-smartphones kunye neetafile.
Abalandeli banokubukela umdlalo ngqo Sky Sports NFL kwaye UMnyhadala oPhambili .
Kungenjalo, unokubukela umdlalo ngeNGOKUngaphandle kokubhalisela isivumelwano.
Abalandeli banokuvula nje i-99p nge Umdlalo weNFL eya kubonisa i-TV epheleleyo yase-US yomdlalo kuquka neentengiso ezingcwele zase-US.
Uyibukela njani iSuper Bowl e-US
E-US, imisebenzi yosasazo ye-Super Bowl ikumjikelezo weminyaka emithathu phakathi kwe-NBC, i-CBS kunye neFox.
Lo bekufanele ukuba ibe ngunyaka we-CBS wokusasaza umsitho, kodwa urhwebo lwenethiwekhi lwenzekile okuthetha ukuba bathathe iSuper Bowl yalo nyaka uphelileyo ukunqanda ukungqubana nokugubungela iiOlimpiki zaseBusika zika-2022. Batshintshe indawo kunye ne-NBC, abasemsebenzini ngeli xesha.
Umhlalutyi kunye neendima zomhlalutyi zisaza kuqinisekiswa ngokupheleleyo ngo-2022, kodwa umsasazi odumileyo u-Al Michaels ebeyinto eqhelekileyo kujikelezo ukusukela ngo-1988 - ukusuka kwi-ABC ukuya kwi-NBC - kwaye kusenokwenzeka ukuba aphinde avele ngaphandle koqikelelo lokuba angafudukela kwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon. njengoko benyusa ukhuseleko lwabo ngo-2022. Udityaniswa noCris Collinsworth.
Ngo-2021, uJim Nantz kunye noTony Romo bazisa yonke i-coverage ye-Super Bowl LV njengoko i-Tampa Bay Buccaneers yadiliza iiNtloko zesiXeko saseKansas.
Ukuba ujonge enye into onokuyibukela jonga iSikhokelo seTV yethu. Ndwendwela i-hub yethu ezinikeleyo ngeendaba ezininzi zeMidlalo.
Witcher tv series review
zingaphi iziqephu izinto zakhe ezimnyama
umgca womsebenzi series 5 episode 6
ibutho 5i pro
abadubuli web real ezithengiswayo
mina kunye nenamba yasezintabeni